शरदकुमार गौचन हत्याका योजनाकार पक्राउ, के थियो कारण ? – Halkaro
शरदकुमार गौचन हत्याका योजनाकार पक्राउ, के थियो कारण ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १८ मंसिर सोमबार
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकार समीरमानसिंह बस्नेत पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं–१३ बाफलका ३४ वर्षीय बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले शनिबार चितवनको नारायणगढबाट पक्राउ गरेको हो । सिआइबीका प्रमुख डिआइजी पुष्कर कार्कीले बस्नेतकै योजनामा गौचनको हत्या भएको बताए ।
← निर्वाचन प्रचारको अन्तिम दिन को कहाँ व्यस्त ?
सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको छैन – गैँडाकोट उपप्रमुख कंडेल →
प्रदेश २ बाट प्रदेशसभा सांसदको प्रधानमन्त्रीलार्इ खुलापत्र, तपार्इँलार्इ प्रदेशमा स्वागत गर्ने इच्छा छैन !
वाजपेयीः वाककलामा निपूर्ण, अब सुनिने छैनन् उनका व्यंग्य
सांसद सोध्छन् ‘सडकका खाल्टा कहिले पुरिन्छ ?’ मन्त्री भन्छन्, ‘काठमाडौँमा आकाशे रेल कुद्छ’